‘बालबालिका कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्’ – Ishan Hospital
‘बालबालिका कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्’
बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचित र सम्मानित नाम हो, प्रा. डा. रामनन्दन प्रसाद चौधरी (आरपी) । लामो समय कान्ति बाल अस्पतालमा रहेर बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका प्रा.डा चौधरी हाल ईशान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । ईशान बाल तथा महिला अस्पताललाई नेपालको उत्कृष्ट बाल तथा महिला अस्पतालको रुपमा बिकास गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशिल छन् उनी । प्रा.डा चौधरीसँग कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीमा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था, संक्रमण जोखिम र रोकथामका उपया बारेमा कुराकानी गरेका छौं । यसैगरी बालबालिका र महिलाको उपचारमा ईशान बाल तथा महिला अस्पतालबाट उपलब्ध सेवा सुबिधाको बारेमा पनि संवाद गरेका छौं । संवादको सम्पादित अंश :
यो कोराना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको समयमा बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
– अहिले कोभिड–१९ सातौं महिना चलिरहेको छ । कोभिड–१९ को मुख्य प्रभावित समूह बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरु रहेका छन् । बच्चाहरुको कुरा गर्दा सुरुमा केही हुन्न भन्ने गलत बुझाई थियो । तर नेपालको ‘डाटा’ हेर्दा नवजात शिशुहरुमा समेत संक्रमण भएको छ । हाम्रो यहि अस्पतालमै हामीले कोभिड–१९ संक्रमण भएको तीन बच्चाको अप्रेसन पनि गरेका छौं । ठूलाको तुलनामा बच्चाहरुमा अलि फरक पर्छ । हामीले हात धुने गरौं, मास्कको प्रयोग गरौं, सामजिक दूरी कायम गरौं भनेर हुँदैन । बुझ्ने बच्चा भए ठिकै हुन्छ, तर नबुझ्ने बच्चाहरुलाई गाह्रो पर्छ ।
यता ६ महिनादेखि स्कुल पनि बन्द हुँदा साथीहरुबाट टाढिएका छन् । यसले मानसिक रुपमा पनि असर पारिरहेको छ । आमा बुबालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ‘स्कुल नखुलेको अवस्थामा, साथीभाइसँग बञ्चित भएको अवस्थामा बच्चाहरुलाई अलि बढी ध्यान दिनुहोस्, बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्, अलि धेरै समय बिताउनुहोस ।’ नवजात शिशुहरुमा ६ महिनासम्म रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको हुँदैन । ६ महिनासम्म आमाको दूधबाट गएको एन्टिबडीजले संक्रमण बच्न सकिन्छ ।
महामारीको यो समय बालबालिकामा कस्तो असर परिरहेको छ, उनीहरुलाई जोगाउन के गर्नुपर्छ ? उनीहरुलाई कोभिड–१९ बाट बचाउन के–के गर्नुपर्छ ?
नवजात शिशुका लागि गर्भावस्थामै आमा संक्रमित भए प्रसुतीमा विशेष ध्यान राख्नु पर्छ । जहाँ चाहीं आमा र बच्चा दुबैलाई स्याहार गर्न सकिन्छ । प्रसुती पश्चात बच्चालाई संक्रमण भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिन्छ । आमालाई पोजिटिभ छ र बच्चालाई छैन भने दूरी कायम गरेर दूध खुवाउन मिल्छ । ६ महिनासम्म आमाकै दूधबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्राप्त हुने गर्दछ । आमा संक्रमित भए पनि नवजात शिशुलाई आमाले सावधानी अपनाएर दूध खुवाउन मिल्छ । यदि ठूलो बच्चाहरु भए अंगालोमा लिने, म्वाई खाने जस्ता क्रियाकलापबाट जोगाउनु पर्छ । मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।
महामारीका बीच ईशान बाल तथा महिला अस्पतालमा बिरामीहरु आउने दर कतिको छ ?
– २०५२ सालमा स्थापना भएको यो अस्पताल २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो नेपालको पहिलो प्राइभेट बाल अस्पताल हो । यहाँ देशभरका विरामीहरु आउने गर्छ । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला विरामीको संख्या धेरै नै घटेको छ । आउट प्यासेन्ट डिर्पाटमेन्टमा अहिले १० देखि १५ प्रतिशत मात्र आइरहेका छन् । इन्डोरमा १० देखि २० प्रतिशत मात्रै विरामी भर्ना गरिहेको छौं र उपचार गरिहेको छौं ।
अस्पतालबाट कोरोना सर्न सक्छ भनेर अहिले मान्छेहरु अस्पताल जान डराइरहेको अवस्था छ, अझ महिला तथा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य संवेदनशिल हुन्छ, उनीहरुलाई सुरक्षित हिसावमा उपचार गर्न कस्तो प्रकारका सुरक्षा विधिहरु अपनाइ रहनु भएको छ ?
– अस्पतालमा कोरोना भनेपछि डराउनु स्वाभाविक हो । तर, हाम्रो अस्पतालले नेपालमा कोरोना देखिएदेखि नै दैनिकरुपमा अस्पतालले अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सावधानी अपनाएको छौं । हामीले साबुन पानीको व्यवस्था गरेको छौं । साबुनपानी प्रयोग नगर्नेहरुका लागि ह्याण्ड सेनिटाइजर व्यवस्था गरेका छौं । अनिवार्यरुपमा अस्पताल आउनेहरुका लागि मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रो हयुनसिसमा आउने सम्पूर्ण विरामी, डाक्टर, कर्मचारीहरुले पिपिई लगाइरहेका छन् । जति पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाइरहेको छौं ।
म बाल चिकित्सक भएको हिसाबले हेर्दा शल्यक्रियामा अझै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखेको छु । बिरामीलाई बेहोस पार्दा बेहोस गर्ने डाक्टरहरु संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले डाक्टरहरुले एन नाइटफाइभ माक्स, फेसिल, पिपिई लगाएर काम गरिहेको छौं । हामीले तीन वटा कोभिड–१९ केसलाई पनि आकस्मिक शल्यक्रिया गरेका छौं । एउटा केशलाई एक हप्ता पछि कोरोना नेगेटिभ देखिए पनि शल्यक्रिया गरेका छौं । डाक्टरहरु अप्रेसन पछि बिरामीलाई राखिने वार्डहरुमा पनि पिपिई लगाएर नै राउण्डअप गर्नु हुन्छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मी धेरै संक्रमित भइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण सावधानीहरु अपनाएको छौं ।
प्रा. डा. रामनन्दन प्रसाद चौधरी (आरपी)
यो अस्पतालमा कोरोना संक्रमण नभएको व्यक्ति आएर, फर्केर जाँदा संक्रमित नभई जान्छन् भनेर ढुक्कका साथ भन्न सक्नु हुन्छ ?
हामीले जुन हिसाबले गार्डदेखि स्वास्थ्यका कर्मचारीसम्म जुन किसिमको सावधानी लिएका छौं, त्यस अनुसार भन्न सक्छौं, ‘हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीका कारण उहाँहरुलाई कोभिड–१९ संक्रमण हुने अवस्था छैन ।’ तर अस्पतालमा आउने व्यक्तिहरु बाहिर जानुहुन्छ, सपिङ गर्न जानुहुन्छ, क्यान्टिनमा जाँदा उहाँले युनिभर्सल सावधानीहरु लिइरहेको हुनुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट संक्रमण हुने अवस्था छैन ।
.यो अस्पताल अरु भन्दा के फरक छ ? र कस्तो सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ ?
हामीले कोभिड–१९ को कारण सिल्भर जुब्ली मनाउन पाएका छैनौं । नेपालको पहिलो प्राइभेट बाल अस्पताल हो । नेपालको रिफ्रेरल बाल अस्पतालको रुपमा विकास भइसकेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका महिला प्रसुतीका लागि आउनु हुन्छ । शुरुमा १५ बेडबाट बाल अस्पताल शुरु भयो । त्यसको दुई–तीन वर्षपछि महिला तथा प्रसुती सेवा शुरु भयो । अहिले मल्टिमेशिनरी एप्रोचमा गएका छौं । यहाँ चाहिने नाक, कान, घाँटी, छाला, हड्डी, प्याथोलोजी सबै सुविधा छ । यहाँ होलेस्टिक सुविधा छ । विरामी आएपछि एउटा रोग उपचार यहाँ गर्ने र अर्को रोग अर्को ठाउँमा उपचार गर्न जान पर्दैन ।
२५ वर्ष प्रवेश गरेपछि सुपर स्पेशिलेटी सेवामा पुगिसकेको छौं । बच्चाको झाडा पखाला र निमोनियाको मात्र होइन, मुटु, मृगौला, आन्द्रासम्बन्धी सबै किसिमको उपचारहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छौं । नेपालमा प्रिरिडियक सर्जरीको कुरा गर्दा सबैले थाहा पाएको अरु ठाउँमा नभएको सर्जरीहरु पनि यहाँ हुन्छ । भारतबाट विरामीहरु आएर उपचार गराएर फर्किएका छन । प्रिरिडियक सर्जरीहरु भर्खर जन्मेको बच्चादेखि लिएर १८ वर्षेसम्मको जटिल भन्दा जटिल सर्जरीहरु यहाँ गर्छाै । अरुको भन्दा पनि पक्कै फरक छ ।
कोभिड–१९ को समयमा सरकारी अस्पतालमा पनि खोप अभाव भइरहेका बेला हामी सात महिना, हप्ता दिने दुई वटा खोप हामी दिइरहेकै थियौं । यो पनि एउटा कुरा हो । अर्को कुरा आकस्मिक कक्षमा २४ सै घण्टा बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध हुनुहुन्छ । नेपालको कुनै अस्पतालमा २४ सै घण्टा विशेषज्ञबाट सेवा दिने छैनन् ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा निःशुल्क खोपहरु दिइरहेको हुन्छ । यहाँ दिने खोपहरु कसरी दिनुहुन्छ ? तपाईहरुले दिने खोपहरुमा कुन कुनमा शुल्क लाग्छ, कुनमा लाग्दैन ?
खोपको कुरा गर्दा हामीले झनै सेवा विस्तार गरेका छौं । सरकारी खोपहरु आइतबार र बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म दिने गर्छौ । सरकारी खोप निःशुल्क दिने भनेकाले हामीले पनि निःशुल्क दिन्छौं । टेक्निकल सिरिन्जहरुको लिन्छौं । खोपको पैसा लाग्दैन । सरकारी खोपहरु विभागबाटै लिएर कार्ड बनाछौं । सम्पर्क नम्बर लिन्छौं । उहाँलाई खोप लिने बेलामा सम्पर्क पनि गर्छौ ।
त्यो बाहेक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण खोपहरु दिने गर्छौ । नेपालमा उपलब्ध भएको सस्तो भन्दा सस्तो, महँगो भन्दा महँगो खोपहरु उपलब्ध गराउँछौं । खोपका लागि ट्रेनिङ लिएका स्टाफहरु हुनुहुन्छ । २५ वर्ष बण्ी अनुभव भएका भ्याक्सिलेटरहरु हुनुहुन्छ ।
खोप दिंदा तपाईहरुको जनशक्ति र मेसिनहरु प्रयोग हुन्छ, त्यसको पैसा लिनुहुन्छ ? एउटा बच्चालाई नियमित सम्पूर्ण खोपहरु पुरा गर्न निजी अस्पतालमा कति खर्च गर्नुपर्छ ?
ठयाक्कै भन्न चाहीं डाटा नै निकाल्नु पर्छ । विभिन्न प्रकारको खोपहरु छन् । त्यसमा धेरै विकल्पहरु छन् । त्यो खोपहरु सबैले लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । खोप लिने समय पनि हुन्छ । कुनै एक वर्षसम्म, कुनै २ बर्षसम्म । कुनै ९ वर्षसम्म दिने एउटा सरभाईभ क्यान्सर नहुने भ्याक्सिनहरु पनि छ । हामीले स्डान्र्ड भ्याक्सिनहरु कोल्ड चेन्ज भन्छ । कोल्ड चेन्ज गर्न जरुरी छ । भ्याक्सिन भनेको खाली पैसा खर्च गरेर कोल्ड चेन्ज भएको छैन भने निःशुल्क दिए पनि तापक्रम व्यवस्थापन नगरे काम लाग्दैन् । यी कुराहरु पनि हामी व्यवस्थापन गरेका छौं ।
शहरमा एक गर्भवती महिला नियमित चिकित्सकसँग सल्लाह र सुझावमा बसेका हुन्छन्, तर गाउँबाट आउने विरामी जो चिकित्सक, नियमित परीक्षण नगराई एकै पटक बच्चा जन्माउन आउने महिलाले यहाँ सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
सरकारी अस्पतालले पनि नियमित चेक गराएको छैन भने लिन मान्दैन । यदि बाहिरबाट आउनु भएको छ कोभिड–१९ को केश बाहेकका नियमित चेकअप नगराएकालाई पनि सुविधा दिएका छौं ।
कुनै दुर्गम स्थानबाट कोही प्रसुती गराउन आए भने फर्किदासम्म निजी अस्पतालमा कति खर्च गर्नुपर्छ ?
सामान्य केस छ, ब्लड प्रेसर छैन, डाइभिटिज छैन । कुनै समस्या छैन भने २०–२५ हजारमा प्रसुती हुन्छ । तर सामान्य छैन भने सिजर गर्न पर्ने, आइसियुमा राख्नुपर्ने, एनआइसियुमा राख्नुपर्ने भयो भने त्यसै अनुसार खर्च लाग्छ । सिजर गर्दा ६०–७० हजार जति लाग्छ । हामीसँग सबै भन्दा पुरानो सघन उपचार कक्ष पनि छ ।
एउटा स्वस्थ बच्चा कति कति समयमा अस्पताल वा चिकित्सकलाई देखाउन आवश्यक छ ?
जन्मिसकेपछि बच्चालाई नियमित चेकअप गराउनुपर्छ । यति भन्ने छैन । दुई–तीन महिनामा देखाए हुन्छ । विदेशमा नियमित चेकअप नै गराउने गर्छन् । यदि बच्चा जन्माउने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने नेपालमा पनि शिक्षित आमा बुबाहरुले चेकअप गराउन थालेका छन् । भ्रुण अवस्थादेखि पाठेघरमा ग्रन्थी बन्ने बेला हुन्छ । त्यो बेला अल्कोहलहरु नखाने, सिटी स्क्यानहरु नगर्दा हुन्छ भने नगर्ने । त्यस्तै डाक्टहरु सल्लाह औषधिहरु खाँदा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र खाने गर्नुपर्छ । त्यो बेला नै सबैभन्दा धेरै समस्यहरु हुँदा हुने हो ।
एक महिनादेखि तीन महिनासम्म चेकअप गरेर अल्ट्रासाउण्ड गराइ राख्दा बच्चा सामान्य छ कि छैन थाहा हुन्छ । केही समस्या छ भने सर्जिकल गर्नुपर्ने भयो भने बाल रोग विशेषज्ञलाई देखाउन सकिन्छ । छैन भने अरु डाक्टरहरुलाई पनि देखाएर गर्न सकिन्छ । प्रसुतीको जति समय नजिक हुँदै जान्छ रेगुलर चेकअप गरेर बच्चालाई कहाँ जन्माउने निर्णय गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा भए बच्चालाई समस्या छैन । पेरीफेरीमै प्रसुती गराउँदा हुन्छ । तर, यदि बच्चालाई समस्या भए राम्रो अस्पतालमा लानुपर्छ ।
कोभिड–१९ को कारण हामीहरु दिनहुँ अप्ठयारो अवस्थामा जाँदैछौ । अब यस अवस्थामा सुत्केरी आमा र बच्चाले के सावधानी अपनाउनु पर्छ ?
म बालरोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने आमा र बच्चाका अभिभावकलाई हिँउद महिनामा चिसोबाट जोगाउनु पर्छ । रेगुलर चेकअप गराउनु पर्छ । मास्क लगाउने । हात धुने । दूरी कायम गर्ने महत्वपूर्ण विषय हुन् । यी सावधानी अपनाउनु पर्छ । दशैमा गाउँ जाँदा र आउँदा झनै संक्रमित हुने डर हुन्छ, यस्तो कुरामा विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।